Duulimaadyada Saudia, Emirates, Etihad Airways ee taga Jamaica - Kacaan Dalxiis?
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Jamaica News Breaking » Duulimaadyada Saudia, Emirates, Etihad Airways ee taga Jamaica - Kacaan Dalxiis?
Airlines • Airport • Wararka Ururada • Aviation • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Caribbean • Wararka Dowladda • Jamaica News Breaking • Wararka Kenya • News • Dib-u-dhiska • Sacuudi Carabiya Warka • Dalxiiska • Hadalka Dalxiiska • Sirta Safarka • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda • Wararka kala duwan
HE Edmund Bartlett Jamaica, Ahmed Al Khateeb, Saudi Arabia
Kacaan dalxiis ayaa ku jira sameynta duulimaadyo cusub oo suuragal ah inay u baxaan Jamaica. Duulimaadyada ka imanaya Dubai ilaa Montego Bay ama Kingston ee Emirates, Abu Dhabi ee Etihad, ama duulimaadyada Jeddah ama Riad ee Jamaica ku tagaya Saudia?
Duulimaadyada noocan oo kale ah waxaa loo qaabeyn karaa inay ku xirmaan Jamaica ilaa Bahamas, St. Lucia, St. Martin, Dominican Republic, Trinidad & Tobago iyo meelaha kale ee fasaxa ee Caribbean? Wasiirka Bartlett oo ka socda Jamaica iyo Ahmed Al Khateeb oo ka socda Saudi Arabia ayaa wax weyn karinaya.
Jamaica waxay noqon kartaa xarunta duulimaadka ee Caribbean-ka ee ku xira suuqyo cusub oo ay ku jiraan Imaaraadka Carabta, ama Sacuudi Carabiya.
Boqortooyada Sacuudi Carabiya waxay horeyba u noqotay goob dalxiis caalami ah oo kulul. Caawimaad yar, Jamaica waxay kusii jeedaa inay noqoto xarunta Dalxiiska Caribbean-ka.
Sacuudi Carabiya waxay leedahay lacag iyo isku xirnaan. Jamaica waxaa loo arkaa inay tahay dejiye isbeddel dalxiis caalami ah. Wadashaqeyn cusub oo guuleysata ayaa ku jirta sameynta, iyo laga yaabee inay si dhakhso leh ku socoto.
Qaab kacaan ah Bob Marley ayaa laga yaabaa inuu sameeyay sixirka. Xilli cusub oo ah fursad dalxiis ayaa hadda ka bilaabatay Jamaica, markii Wasiirka Dalxiiska Boqortooyada Sacuudi Carabiya Mudane Ahmed Al Khateeb la arkay isaga iyo martida uu martida u yahay, Wasiirka Dalxiiska Jamaica, Ed Ed Bart Bartt. Labada wasiirba waxay wateen koofiyad baseball oo muujinaysa "Kacaan".
Kacaankii Safarka iyo Dalxiiska, qaabka Bob Marley? Wasiirka Dalxiiska Sacuudiga iyo Jamaica waxay leeyihiin aragti fog.
Sacuudi Carabiya waxay noqotay meesha ugu kulul dalxiiska adduunka. UNWTO wuxuu ka furay Sacuudiga xarun-goboleed, sidaas oo kale WTTC iyo Xarunta Adkaysiga & Maareynta Dhibaatada waa laga yaabaa inuu raaco.
Caan ku ah had iyo jeer ka fikirida sanduuqa oo uu yeesho maskax caalami ah Wasiirka Dalxiiska Jamaica, Mudane. Edmund Bartlett waxaa la wada arkay isagoo dhoola cadeynaya markii uu la kulmay Mudane Ahmed Al Khateeb Wasiirka Dalxiiska ee Boqortooyada Sacuudi Carabiya. Wasiirka Sacuudi Carabiya wuxuu ku sugnaa Jamaica shirkii dhowaan la soo gabagabeeyay ee 66-aad ee gobalada Dalxiiska Adduunka.
Tani waxay ahayd fursad looga wada hadlo suurtagalnimada isku xirnaan hawada ah oo u dhaxeysa Kariibiyaanka iyo gobolka Gacanka. Xiriirka hawada ee noocan oo kale ah wuxuu fursad u noqon doonaa Jamaica iyo inta kale ee Caribbean-ka si ay u abuuraan fursad aan horay loo arag oo ay ku xirmaan Bariga Dhexe, Hindiya, Afrika, Aasiya oo leh xiriir toos ah oo hawada ah oo ay la galaan Caribbean-ka. Jamaica waxay noqon kartaa xarunta duulimaadka duulimaadyada quudinta ee ka imanaya waddamada kale ee Kareebiyaanka ah si ay isugu xirmaan.
Tani kaliya uma abuuri doonto suuqyo cusub Kariibiyaanka, laakiin sidoo kale waxay kordhin doontaa isku xirnaanta u dhexeeya quruumaha jasiiradda.
Barlett wuxuu ka yiri kulanka uu la yeeshay Wasiirka Sacuudiga: “Waxaan ka wada hadalnay isku xirnaanta hawada iyo sida la isugu xirayo Bariga Dhexe, Suuqa Aasiya, iyo meelaha ka tirsan dhinacaas adduunka. Waxaan ka wada hadalnay shirkadaha diyaaradaha ee waaweyn ee ka jira aagaggaas. Gaar ahaan Etihad, Emirates iyo Saudi Arabia Airlines. ”
Sidaas darteed Boqortooyada Sacuudi Carabiya iyo Jamaica waxay kala saxiixdeen heshiis ujeeddo ah. Sidaas waxaa soo sheegay eTurboNews Jimcihii.
Cabitaan (aalkolo la'aan)
“Heshiiska uu wasiir Al Khateeb miiska soo saari doono waa wada-hawlgalayaasha waaweyn ee dhanka duulimaadyada, halka aan mas'uul ka noqon doono isku dubaridka dalalka nagala shaqeeya iskaashiga qaab-dhismeedka dalxiiska ee dhowr meelood, si loo helo Hub. Haysashada xarun noocan oo kale ah ee taraafikada Jamaica waxay ka soo guuri kartaa Bariga Dhexe oo imaan kartaa aaggeenna oo aan ku yeelan karnaa mid ka mid waddan ilaa dal kale, ”ayuu raaciyay.
Bartlett waxay u maleyneysaa in qaabkan ujeedo badan ee suurto galka ahi uu muhiim u yahay horumarka dalxiiska gobolka wuxuuna ballaarin doonaa suuqa si loo abuuro culeys muhiim ah oo loo baahan yahay si loo soo jiito diyaaradaha waaweyn iyo shirkadaha waaweyn ee dalxiiska si ay u xiiseeyaan Jamaica iyo gobolka.
Kaliya kuma xirna isku xirnaanta hawada laga soo galo albaabada laga soo galo UAE, ama Sacuudi Carabiya ilaa Jamaica. Waa fursadaha duulimaadka quudinta ee Hindiya, Afrika, Bartamaha iyo Koonfurta Bari Aasiya iyada oo loo marayo marinka gacanka ilaa Kariibiyaanka iyadoo aan laga walwalin siyaasadaha fiisaha Mareykanka ee adag.
Jamaica waxay u noqon kartaa dalxiis iyo xarun caalami ah ganacsiga gobolka Karibiyaanka.
“Anaga ahaan, tani waa mid waxbadan ka badalaysa sameynta sababtoo ah wadamada yar yar sida Jamaica waligood awood uma lahan doonaan inay helaan diyaarado waawayn sida Emirates Airlines ama Saudia oo noo yimaada duullimaadyo toos ah. Si kastaba ha noqotee, waxaan ka faa'iideysan karnaa duulimaadyadan soo galaya badda Kariibiyaanka, iyagoo halkan ka degaya Jamaica laakiin leh qaybinta dalalka kale ee gobolka, ”ayuu sharraxay.
Koox guuleysata iyo ciyaartii ugu dambeysay
Al Khateeb, wuxuu sidoo kale ku adkeeyay xoojinta isku xirnaanta Bariga Dhexe iyo Kariibiyaanka.
Wasiirka Sacuudi Carabiya wuxuu ka yiri Jamaica: “Waxaan ka wada hadalnay asxaabteyda mowduucyo aad u xasaasi ah waxaana taageereynaa abuurista buundooyin u dhexeeya Bariga Dhexe iyo Caribbean. Waxaan uga mahadcelinayaa Wasiir Bartlett fursaddan oo aan rajeynayaa in aan ballaariyo shirkadda ballaarinta Bariga Dhexe iyo Kariibiyaanka, ”ayuu yiri.
Labada wasiirba waxay kaloo ka wada hadleen dhinacyada kale ee iskaashiga suurtagalka ah ka mid yahay, oo ay ka mid yihiin horumarinta raasammaalka aadanaha, dalxiiska bulshada iyo dhisidda adkeysiga ka jira gobolka.
Bartlett wuxuu sharxay: “Mid ka mid ah meelaha muhiimka ah ee aan ka wada hadalnay waxay ahayd horumarinta adkeysiga iyo maaraynta dhibaatooyinka, iyo sidoo kale joogtaynta tiirarka muhiimka ah ee ay tahay in la saadaaliyo soo kabashada dalxiiska. Laakiin intaas in ka sii badan, muhiimada ay leedahay in la dhiso awood dhexdeeda wadamada leh dalxiiska oo ah wadaha dhaqaalahooda - waa waddamo si liidata loo siiyay dhaqaale ahaan una nugul khalkhalka. Waxaan arki doonnaa wada shaqeyn ka socota dhismaha ka baxsan xarunta adkeysiga ee halkan Jamaica iyo xarunta adkeysiga ee ku taal Sacuudi Carabiya, ”ayey tiri Bartlett.
Waqtigaan la joogo wax waqti ah oo ku saabsan fikradahaas, laakiin hubaal dalxiisku horay ayuu ugu sii socdaa Jamaica iyo wixii ka sii dambeeya - waxaana laga yaabaa inaysan la socon oo keliya booqdayaasha Waqooyiga Ameerika iyo Boqortooyada Ingiriiska.
Eeg albamka sawir qaaska ah guji soo degso Download PDF
Dalxiis ayaa weeraray, dilay, cunay orso gaajaysan markii ...
Soojiidashada Dalxiiska Dalxiis ee ugu Muhiimsan Paris Ayaa Dib U Furmaya ...
WTTC waxay muujineysaa saameynta ba'an ee COVID-19 ee adduunka ...
Kharashka dalxiiska ee Waqooyiga Ameerika ayaa hoos u dhacay 74.1%...
Bandhig Faneedka OTDYKH Waqtiga Nasashada 2021 Ayaa Lagu Qaban Doonaa Magaalada Moscow ...
Hurricane Henry oo ku socda Koorsada Shilka ee New York
Diyaaradda Italia Trasporto Aereo Airline ilaa Alitalia ...
Diyaaradaha Yurub ayaa u diyaar garoobaya jiilaalka adag ...
Isu dheellitirka suuqgeynta dalxiiska iyo baahiyaha amniga
IATA: Komishanka Yurub ee Taabashada Xaqiiqada ah
Waa wax aad u xiiso badan hadda Filibiin dhexdeeda ...
Ruushka iyo Namibiya ayaa fiiso la’aan ku tagaya
IATA waxay ku boorineysaa dowladaha inay raacaan Hagaha WHO ee ...
Air France waxay aaminsan tahay Santa Claus wax ka yar $ 400